Jaamacadda Sayniska Caafimaadka waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Sayniska Caafimaadka waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
jaamacadda ee cilmiga caafimaadka
Qodobbada Xeerka ee Go’aaminta iyo Adeegsiga Shaqaalaha Tacliinta Sare ee Hay’adaha Tacliinta Sare ee Gobolka oo lagu daabacay Jariidada Gazette ee taariikhi ah 02.11.2018 oo loo tiriyey 30583 waaxaha soo socda ee Jaamacadda Sayniska Caafimaadka, Xeerka ku saabsan Kor u qaadista iyo Magacaabista Xarumaha Tacliinta Sare, 2547 Shuruucda aasaaska mabaadi'da in lagu waafaqo luuqadaha baridda iyo sharciga ku saabsan shaqaalaha rayidka ah ee loo yaqaan '657'. Iyada oo la raacayo qodobbada Qodobka Macallinka 48 waa la shaqaaleysiin doonaa. Codsiyada lagu arko inaysan ku habooneyn boosaska la xayeysiiyay waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin kuwo aan shaqeyn.
Aqoonyahanada ayaa ku jira xaalad joogto ah iyo foomka dalabka, oo ay dib u bilaabayaan codsadayaashu cadeynayaan Araştırma Main Research Work,, dukumintiga Aqoonsi Ku-saabsanaanta Xiriiriyaha iyo dukumiintiyada kale ee laga codsadey foomka dalabka waxaa loo diyaariyaa iyaga oo ku daraya 6 (Lix) CDs ama Portable Memory (USB). waa in si shaqsi ah looga codsadaa Waaxda Shaqaalaha Rectorate gudaheeda 15 maalmood laga bilaabo taariikhda la daabacay xayeysiiska.
Macalimiinta xiriiriyaha ah waxay kujiraan xaalad rasmi ah waxayna kujiraan foomka dalabka, vitae vitae, shahaadada xiriiriyaha shahaadada nootaayaysan iyo dukumiintiyada kale ee laga codsadey foomka dalabka iyagoo wata 4 (Afar) CDs ama Portable Memory (USB) iyo faylka ay diyaarisay maalinta 15. gudaheeda waaxda 'Rectorate Personnel Department'.
4 (Afar) CDs ay kujiraan foomka dalabka, vitae vitae, nootaayeysan Ph.D.
Xusuusta la qaadan karo (USB) adoo ku daraya faylka ay diyaariyeen maalmihii 15 laga soo bilaabo taariikhda la shaaciyey ogeysiiska waa in lagu dabaqo unugyada ay khuseyso shaqsi ahaan
Shaacinta Kale iyo Tixgelinnada
- Musharixiinta waxay codsan karaan hal xayeysiin oo ay ka soo baxaan shuruudahooda gaarka ah isla waqtiga lagu dhawaaqo. Murashaxiinta lagu helay inay soo gudbiyeen wax ka badan hal xayeysiin ayaa la tirtiri doonaa.
- Nuqulka asalka ah ama la caddeeyay ee caddeyn u dhigma u dhigma shahaadooyinka dibedda laga soo qaatay ee ay soo saartay Golaha Tacliinta Sare waa in lagu lifaaqo dukumiintiga loo baahan yahay.
- Codsadeyaasha u adeegsan doona xubnaha kuliyada waxaa horay u fiirin doona “Gudiga Baaritaanka iyo Qiimeynta Ujeeddada ay dhisayaan Agaasinkayaga iyo waaxaha la xiriira iyo codsiyada kuwa lagu helo inay buuxiyeen shuruudaha waa la aqbali doonaa.
- Codsadayaasha lama magacaabi doono mana tirtiri doono haddii shuruudaha codsadaha mar dambe la ogaado in ayan habooneyn.
- Codsiyada lagu sameeyo cutubyada barashada afafka qalaad, shuruudaha ugu yar waa in la buuxiyaa iyada oo la raacayo qodobbada la xiriira ee Xeerka ee Mabaadi'da in lagu waafajiyo Afka Baridda iyo Baridda Luuqadda Dibadda ee Machadyada Sare.
- Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan xayeysiiska http://www.sbu.edu.tr/ ama 0216 418 96 16.
FIIRO GAAR AH: Xubnaha kuliyadaha loo xilsaaray shaqaalaha Jaamacadda waxaa lagu meelayn karaa labo sano qaybaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee loo arko inay ku habboon yihiin Agaasinkayaga oo la jaan qaadaya baahiyaha Jaamacadda.
Shaqo qorista Shaqaalaha Akadeemiyada Cilmiga Caafimaadka ee Jaamacadda